Uyilo lweNgcaciso, uLwakhiwo oluNtofontofo, lucocekile kwaye lunoxolo - I-Airbnb
Uyilo lweNgcaciso, uLwakhiwo oluNtofontofo, lucocekile kwaye lunoxolo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguUtku
Iflethi yethu yenzelwe ngokukodwa ukuthuthuzela iindwendwe zethu. Ukongeza, ibekwe kwindawo ekhethekileyo kakhulu ngokwendawo. Ime ngokunxuseneyo nembali yeelevator kunye nesitrato saseDario Moreno, esinezitalato eziyinyani zeGrike zokwakha kunye nezindlu kunye namashishini anxilisayo kunye nalawo angengotywala ecaleni kwayo. Kukuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukusuka kwizithuthi zikawonke-wonke kunye ne-Karataş Tram stop. Ngokuhlwa unokuloba kwi-promenade, ulale engceni elunxwemeni :)
Indawo yethu icocwe ngobuchule kwaye ibulawe iintsholongwane phakathi kokuhlala. Igumbi elinye lokulala linegumbi elinye kunye negumbi lokuhlala kunye nebalcony enemibono yemithi yeorenji. Sizama ukuhlangabezana nazo zonke izinto ozilindeleyo kunye netafile encinci ekhitshini kunye netafile yokutya kubantu abayi-6 kwigumbi lokuhlala kunye nendawo ekhethekileyo yomsebenzi. I-TV kwiflethi yethu ibandakanya i-netflix kwaye unokuyisebenzisa simahla. Kuba isantya sethu se-intanethi siziimegabhithi ezingama-35, ungasebenzisa ngokulula zonke iintlanganiso ze-intanethi kunye namajelo onxibelelwano.
46" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Indlu yethu ikwimizuzu nje emi-2 ukusuka kwiLifti yeMbali. Le ndawo yindawo yokuhlala yabakhenkethi kuphela kwaye ineendawo ezininzi zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa ezikufutshane nayo, kunye nokuhamba imizuzu engama-25 ukusuka kumbindi wesixeko kunye nemizuzu emi-5 kuphela ngemoto yabucala.
Umbuki zindwendwe ngu- Utku
Siyalwazi ulwimi lwezandla :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Konak